ဝမ်းလဲမှန်ပါတယ် သွားလဲတနေ့ (၂) ကြိမ်တိုက်ပါရဲ့ နဲ့ ခံတွင်းနံ့နံနေရင် – Cele Cupid
ဝမ်းလဲမှန်ပါတယ် သွားလဲတနေ့ (၂) ကြိမ်တိုက်ပါရဲ့ နဲ့ ခံတွင်းနံ့နံနေရင်
Ever Best | October 17, 2020 | Knowledge | No Comments
ဝမ္းလဲမွန္ပါတယ္ သြားလဲတေန႔ (၂) ႀကိမ္တိုက္ပါရဲ့ နဲ႔ ခံတြင္းနံ့နံေနရင္
ခုလိုမ်ိဳးေတြျဖစ္ေနတတ္ပါသလား. အစာအိမ္ကေတာ့ အပူအစပ္ စားရင္ နည္းနည္း ေအာင့္ပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္က အပူဓာတ္မ်ား လို႔ အသားကအျမဲ ပူေနတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ဝမ္းလဲမွန္ပါတယ္ အဲ့တာကိုခံတြင္းနံ့ နံေနလို႔ပါ ။ သြားလဲ တေန႔ (၂)ႀကိမ္တိုက္ပါတယ္။
ထမင္းစား ၿပီးတိုင္း လဲ ပလုတ္က်င္းပါတယ္ ဒါေပမဲ့ နံတာမေပ်ာက္သြားပါဘူး။ ခံတြင္းအနံ့ နံတာကိုကိုယ့္ဖာသာ သိေနေတာ့ သူမ်ားနဲ႔စကားေျပာရမွာ စိတ္က မလုံ ဘူးျဖစ္ပါတယ္။ ခံတြင္းနံ့ေပ်ာက္ေဆးေတြလည္း သုံးဖူးပါတယ္။ မရပါ။
ခံတြင္းအနံ့ နံတာေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ အႀကံေပးပါလား။
ဝမ္းထဲမွာေလပူရွိ လို႔ပါ။ မနက္ပိုင္းေရ မခ်ိဳးမီ ဆန္ေဆးေရ အၾကည္ တစ္ဖန္ခြက္ ေသာက္ပါ။ ခံတြင္းအနံ့တက္တာ သက္သာလာ ပါလိမ့္မယ္။ ဆန္ေဆးရည္ ကအေအးပါ။အပူကို နိုင္ပါတယ္။ အုန္းစိမ္းရည္ တစ္ပါတ္ ကို တစ္ႀကိမ္ေသာက္ပါ။ တမာရြက္ျပာခ်ဆားနဲ႔ ေရာသြားတိုက္ပါ။
ညအိပ္ခါ နီးေျခဖဝါးဆား ပြတ္ဒူးအ ထက္မွေအာက္ ေရေလာင္းေျခေဆးေပးရင္ပိုေကာင္းပါသည္ ။ ေရရွည္စြဲလုပ္ၾကည့္ပါ။ ေျခေလးေခ်ာင္းသားတတ္နိုင္သမၽွ ေရွာင္စားပါ။
ေလပူစာမၽွစ္၊ မၽွစ္ခ်ဥ္၊လက္လုပ္ခ်ဥ္၊ခ်ဥ္စပ္ အစာမ်ား၊ အုန္းထမင္းဒန္ေပါက္၊ေရခဲေရ မ်ားေရွာင္ပါ။ အစာအိမ္ေဆး ေလပူက်ေဆးမ်ားစားပါ။
ခုလိုမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်ပါသလား. အစာအိမ်ကတော့ အပူအစပ် စားရင် နည်းနည်း အောင့်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်က အပူဓာတ်များ လို့ အသားကအမြဲ ပူနေတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဝမ်းလဲမှန်ပါတယ် အဲ့တာကိုခံတွင်းနံ့ နံနေလို့ပါ ။ သွားလဲ တနေ့ (၂)ကြိမ်တိုက်ပါတယ်။
ထမင်းစား ပြီးတိုင်း လဲ ပလုတ်ကျင်းပါတယ် ဒါပေမဲ့ နံတာမပျောက်သွားပါဘူး။ ခံတွင်းအနံ့ နံတာကိုကိုယ့်ဖာသာ သိနေတော့ သူများနဲ့စကားပြောရမှာ စိတ်က မလုံ ဘူးဖြစ်ပါတယ်။ ခံတွင်းနံ့ပျောက်ဆေးတွေလည်း သုံးဖူးပါတယ်။ မရပါ။
ခံတွင်းအနံ့ နံတာပျောက်ကင်းအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ အကြံပေးပါလား။
ဝမ်းထဲမှာလေပူရှိ လို့ပါ။ မနက်ပိုင်းရေ မချိုးမီ ဆန်ဆေးရေ အကြည် တစ်ဖန်ခွက် သောက်ပါ။ ခံတွင်းအနံ့တက်တာ သက်သာလာ ပါလိမ့်မယ်။ ဆန်ဆေးရည် ကအအေးပါ။အပူကို နိုင်ပါတယ်။ အုန်းစိမ်းရည် တစ်ပါတ် ကို တစ်ကြိမ်သောက်ပါ။ တမာရွက်ပြာချဆားနဲ့ ရောသွားတိုက်ပါ။
ညအိပ်ခါ နီးခြေဖဝါးဆား ပွတ်ဒူးအ ထက်မှအောက် ရေလောင်းခြေဆေးပေးရင်ပိုကောင်းပါသည် ။ ရေရှည်စွဲလုပ်ကြည့်ပါ။ ခြေလေးချောင်းသားတတ်နိုင်သမျှ ရှောင်စားပါ။
လေပူစာမျှစ်၊ မျှစ်ချဉ်၊လက်လုပ်ချဉ်၊ချဉ်စပ် အစာများ၊ အုန်းထမင်းဒန်ပေါက်၊ရေခဲရေ များရှောင်ပါ။ အစာအိမ်ဆေး လေပူကျဆေးများစားပါ။
ချစ်သူ မိန်းကလေး အပျိုစစ် မစစ် သိအောင် စမ်းသပ်တဲ့နည်းလေး
သရဏဂုံ သုံးပါးကို အမြဲမပျက်ရွတ်ဆိုပွားများသော ပုဂ္ဂိုလ် တို့ ရရှိနိုင်သော အကျိုးတရားများ
ဆီချို၊ သွေးတိုး၊ လေငန်းရောဂါများ ရောဂါအလိုက် အုန်းမုတ်ခွက် နင်းနည်း